သိန်းထီဆု ကြီး​များရုတ်​တရက်​​ပေါက်​တတ်​သော ကျိန်းသေ ထီပေါက်မည့်် လက္ခဏာ😍😱 . (အပြည့်စုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ👇)
ကျွန်ုပ်​ယခုပြ​သောကံကြမ္မာထီးရိုး လမ်း​ကြောင်းများမှာ လူအ​တော်​များများမှာပါခဲသည်​၊ ပါခဲ့ရင်​လဲအထူးသတိပြုရပါမည်။ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ ထိုလမ်း​ကြောင်းများပါ​သော လက္ခဏာပိုင်​ရှင်​သည်​၊အသက်​ပိုင်းတစ်​ခုခု တွင်​ ရုတ်​တရက်​​အောင်​မြင်​ချမ်းသာခြင်း၊သိန်းထီဆု ကြီး​များရုတ်​တရက်​​ပေါက်​တတ်​၍အကယ်​၍ထီမ​ပေါက်​မချမ်းသာပါကရူး​လောက်​သည်​အထိဖြစ်​သွားတတ်​သည်​။
နံပါတ် (၁) ကမ္မ​လေခ+ကံလမ်း​ကြောင်း
လက္ခဏာရှင်​ရဲ့လက်​ဖဝါးမှာ ကျွန်ုပ်​ပြထားတဲ့ နံပါတ်(၁)ကမ္မ​လေခ​လမ်း​ကြောင်းပါလာခဲ့ပါက လက္ခဏာရှင်​ဟာအရံလက္ခဏာလမ်း​ကြောင်းများ ​ကောင်းခဲ့ရင်​​တော့ဆိုးကျိုးမရှိပါ ထီဆုကြီးကြီး​ပေါက်​၍ ဘဝတွင်​ မထင်​မှတ်​ပဲ ချမ်းသာကိန်းဆိုက်​ပါမည်​၊ လက္ခဏာရှင်​ရဲ့လက်​ဝါးမှာပါတဲ့ အရံလမ်း​ကြောင်း​တွေမ​ကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်​​တော့ အင်​မတန်​သတိထားရပါမယ်​ ဘဝင်​မြင့်​၍ဘဝင်​ရူးများဖြစ်​တတ်​ခြင်း၊မိမိ ကိုယ်​ကိုအထင်​ကြီး၍​အောက်​​ခြေလွတ်​​နေတတ်​ခြင်း၊အရာရာမှာစိုးရိမ်​ထိတ်​လန့်​​နေတတ်​၍ အသိစိတ်​လွတ်​သည်​အထိရူးသွားနိုင်​ပါသည်​။
လက္ခဏာရှင်​ရဲ့လက်​ဝါးမှာ ကျွန်ုပ်​ပြထားတဲ့ ​ဇေယ​လေခလမ်း​ကြောင်းပါလာခဲ့ပါက ထီဆုကြီးများဧကန်​​ပေါက်​၍ ချမ်းသာဖို့၇၅%​သေချာပါပြီ၊ ထိုလမ်း​ကြောင်းပါလာပါက ကံ​ကောင်းခြင်း၊ကံဆိုးခြင်းကို ထိန်းညှိ​ပေးခြင်း၊ဘဝတွင်​အရာရာစိတ်​ဆင်းရဲမှုနည်း၍ စိတ်​ချမ်းသာမှုနဲ့ဝမ်းသာ​ပျော်​ရွှင်​စွာ​နေရတတ်​ ခြင်း၊ဒုက္ခကိုကြာကြာမ​ရောက်​ရတတ်​ခြင်း၊ပင်​ ပင်​ပမ်းပမ်းကြာကြာမလုပ်​ရတတ်​ခြင်း၊​ငွေ​ ​ကြေးဥစ္စာရုတ်​တရက်​ချမ်းသာ၍ ထီဆုကြီးများ​ပေါက်​တတ်​ပါသည်​၊ထိုလမ်း ​ကြောင်းပါလာပါကအဆိုးမှအ​ကောင်းကိုတတ်​နိုင်​သမျအ​ထောက်​အကူပြု​ပေးပါသည်​။
လက္ခဏာရှင်​ရဲ့လက်​ဖဝါးမှာ ကျွန်ုပ်​ပြထားတဲ့ ဉာဏ​လေခလမ်း​ကြောင်းဟာ ကျွန်း၊ကြက်​​ခြေခတ်​၊အပြတ်​သံကွင်းဆက်​များမရှိခဲ့ပါက လက္ခဏာရှင်​ဟာ အရာရာမှာဥာဏ်​ပညာကြီးမားခြင်း၊သွက်​လက်​ထက်​မြတ်​၍ ဖြတ်​ထိုးဥာဏ်​​ကောင်းခြင်း၊အ​မျော်​အမြင်​ကြီး၍ ကိုယ်​ကျင့်​သီလထိန်းတတ်​ခြင်း၊ရုတ်​တရက်​ကံ​ကောင်း၍ထီဆုများ​ပေါက်​တတ်​ခြင်း၊မိမိပိုင်​ဆိုင်​​သော ​ငွေ​ကြေးဥစ္စာကိုလဲ မ​ပျောက်​ပျက်​​အောင်​ထိန်းသိမ်းတတ်​ခြင်း၊ ကျွန်း၊ကြက်​​ခြေခတ်​များပါလာရင်​​တော့ ​ပေါ​တော​တော ရူးတူးတူးဖြစ်​၍ မိမိကိုယ်​ကိုမထိမ်းနိုင်​​အောင်​ သွက်​သွက်​ခါ​အောင်​ရူးတတ်​သည်​။
လက္ခဏာပညာရပ်​သည်​၊် ​လေ့လာလိုက်​စား​လေနက်​နဲ​လေဖြစ်​​သောပညာရပ်​ဖြစ်​ပါသည်​၊လက်​ဖဝါး​ပေါ်ကလမ်း​ ကြောင်းက​လေးများသည့်​ သင့်​ဘဝရဲ့အနာဂတ်​ ပစ္စုပန်​များ​ဖော်​ပြ​ပေး​နေ​သော ၇၅%​မြေပုံအမှတ်​အသားဆိုမမှားနိုင်​ပါဘူး ထို​ကြောင့်​သင့်​ဘဝရဲ့ အနာဂတ်​မှာ ပညာ​ရေး၊လူမှု​ရေး၊စီးပွား​ရေး၊ကျန်းမာ​ရေး၊အိမ်​​ထောင်​​ရေးနှင့်​တခြားလူမှုအခက်​ခဲများ၊သားသမီးပညာေ​ရးများကိုကြိုတင်​သိရှိနိုင်​ပြီးဘဝကိုဘယ်​လိုစီမံ​ဆောင်​ရွက်​ရမလဲဆိုတာကိုသိရ​ အောင်​ သင့်​လက္ခဏာကိုအွန်​လိုင်းမှတဆင့်​​ပေးပို့၍ တွက်​ချက်​နိုင်​ပါသည်​။
လက္ခဏာဆရာမင်းခန့်် ၊ ​ရေ​ကြောင်းအင်​ဂျင်​နီယာ(AE.EX) ၊ တပ်မ​တော်​(​ရေ) NAVY-35024.E ၊Viber>>>09694506705
ကြှနျုပျ​ယခုပွ​သောကံကွမ်မာထီးရိုး လမျး​ကွောငျးမြားမှာ လူအ​တျော​မြားမြားမှာပါခဲသညျ​၊ ပါခဲ့ရငျ​လဲအထူးသတိပွုရပါမညျ။ဘာ​ကွောငျ့​လဲဆို​တော့ ထိုလမျး​ကွောငျးမြားပါ​သော လက်ခဏာပိုငျ​ရှငျ​သညျ​၊အသကျ​ပိုငျးတဈ​ခုခု တှငျ​ ရုတျ​တရကျ​​အောငျ​မွငျ​ခမျြးသာခွငျး၊သိနျးထီဆု ကွီး​မြားရုတျ​တရကျ​​ပေါကျ​တတျ​၍အကယျ​၍ထီမ​ပေါကျ​မခမျြးသာပါကရူး​လောကျ​သညျ​အထိဖွဈ​သှားတတျ​သညျ​။
နံပါတျ (၁) ကမ်မ​လခေ+ကံလမျး​ကွောငျး – လက်ခဏာရှငျ​ရဲ့လကျ​ဖဝါးမှာ ကြှနျုပျ​ပွထားတဲ့ နံပါတျ(၁)ကမ်မ​လခေ​လမျး​ကွောငျးပါလာခဲ့ပါက လက်ခဏာရှငျ​ဟာအရံလက်ခဏာလမျး​ကွောငျးမြား ​ကောငျးခဲ့ရငျ​​တော့ဆိုးကြိုးမရှိပါ ထီဆုကွီးကွီး​ပေါကျ​၍ ဘဝတှငျ​ မထငျ​မှတျ​ပဲ ခမျြးသာကိနျးဆိုကျ​ပါမညျ​၊ လက်ခဏာရှငျ​ရဲ့လကျ​ဝါးမှာပါတဲ့ အရံလမျး​ကွောငျး​တှမေ​ကောငျးခဲ့ဘူးဆိုရငျ​​တော့ အငျ​မတနျ​သတိထားရပါမယျ​ ဘဝငျ​မွငျ့​၍ဘဝငျ​ရူးမြားဖွဈ​တတျ​ခွငျး၊မိမိ ကိုယျ​ကိုအထငျ​ကွီး၍​အောကျ​​ခွလှေတျ​​နတေတျ​ခွငျး၊အရာရာမှာစိုးရိမျ​ထိတျ​လနျ့​​နတေတျ​၍ အသိစိတျ​လှတျ​သညျ​အထိရူးသှားနိုငျ​ပါသညျ​။
နံပါတျ(၂) ​ဇယေ​လခေ+​အောငျ​မွငျ​​ရေး – လက်ခဏာရှငျ​ရဲ့လကျ​ဝါးမှာ ကြှနျုပျ​ပွထားတဲ့ ​ဇယေ​လခေလမျး​ကွောငျးပါလာခဲ့ပါက ထီဆုကွီးမြားဧကနျ​​ပေါကျ​၍ ခမျြးသာဖို့ရ၅%​သခြောပါပွီ၊ ထိုလမျး​ကွောငျးပါလာပါက ကံ​ကောငျးခွငျး၊ကံဆိုးခွငျးကို ထိနျးညှိ​ပေးခွငျး၊ဘဝတှငျ​အရာရာစိတျ​ဆငျးရဲမှုနညျး၍ စိတျ​ခမျြးသာမှုနဲ့ဝမျးသာ​ပြျော​ရှငျ​စှာ​နရေတတျ​ ခွငျး၊ဒုက်ခကိုကွာကွာမ​ရောကျ​ရတတျ​ခွငျး၊ပငျ​ ပငျ​ပမျးပမျးကွာကွာမလုပျ​ရတတျ​ခွငျး၊​ငှေ​ ​ကွေးဥစ်စာရုတျ​တရကျ​ခမျြးသာ၍ ထီဆုကွီးမြား​ပေါကျ​တတျ​ပါသညျ​၊ထိုလမျး ​ကွောငျးပါလာပါကအဆိုးမှအ​ကောငျးကိုတတျ​နိုငျ​သမအြ​ထောကျ​အကူပွု​ပေးပါသညျ​။
နံပါတျ(၃) ဉာဏ​လခေ+ဉာဏျ​လမျး​ကွောငျး – လက်ခဏာရှငျ​ရဲ့လကျ​ဖဝါးမှာ ကြှနျုပျ​ပွထားတဲ့ ဉာဏ​လခေလမျး​ကွောငျးဟာ ကြှနျး၊ကွကျ​​ခွခေတျ​၊အပွတျ​သံကှငျးဆကျ​မြားမရှိခဲ့ပါက လက်ခဏာရှငျ​ဟာ အရာရာမှာဉာဏျ​ပညာကွီးမားခွငျး၊သှကျ​လကျ​ထကျ​မွတျ​၍ ဖွတျ​ထိုးဉာဏျ​​ကောငျးခွငျး၊အ​မြျော​အမွငျ​ကွီး၍ ကိုယျ​ကငျြ့​သီလထိနျးတတျ​ခွငျး၊ရုတျ​တရကျ​ကံ​ကောငျး၍ထီဆုမြား​ပေါကျ​တတျ​ခွငျး၊မိမိပိုငျ​ဆိုငျ​​သော ​ငှေ​ကွေးဥစ်စာကိုလဲ မ​ပြောကျ​ပကျြ​​အောငျ​ထိနျးသိမျးတတျ​ခွငျး၊ ကြှနျး၊ကွကျ​​ခွခေတျ​မြားပါလာရငျ​​တော့ ​ပေါ​တော​တော ရူးတူးတူးဖွဈ​၍ မိမိကိုယျ​ကိုမထိမျးနိုငျ​​အောငျ​ သှကျ​သှကျ​ခါ​အောငျ​ရူးတတျ​သညျ​။
လက်ခဏာပညာရပျ​သညျ​၊ျ ​လလေ့ာလိုကျ​စား​လနေကျ​နဲ​လဖွေဈ​​သောပညာရပျ​ဖွဈ​ပါသညျ​၊လကျ​ဖဝါး​ပျေါကလမျး​ ကွောငျးက​လေးမြားသညျ့​ သငျ့​ဘဝရဲ့အနာဂတျ​ ပစ်စုပနျ​မြား​ဖျော​ပွ​ပေး​နေ​သော ၇၅%​မွပေုံအမှတျ​အသားဆိုမမှားနိုငျ​ပါဘူး ထို​ကွောငျ့​သငျ့​ဘဝရဲ့ အနာဂတျ​မှာ ပညာ​ရေး၊လူမှု​ရေး၊စီးပှား​ရေး၊ကနျြးမာ​ရေး၊အိမျ​​ထောငျ​​ရေးနှငျ့​တခွားလူမှုအခကျ​ခဲမြား၊သားသမီးပညာေ​ရးမြားကိုကွိုတငျ​သိရှိနိုငျ​ပွီးဘဝကိုဘယျ​လိုစီမံ​ဆောငျ​ရှကျ​ရမလဲဆိုတာကိုသိရ​ အောငျ​ သငျ့​လက်ခဏာကိုအှနျ​လိုငျးမှတဆငျ့​​ပေးပို့၍ တှကျ​ခကျြ​နိုငျ​ပါသညျ​။ လက်ခဏာဆရာမငျးခနျ့ျ ၊ ​ရေ​ကွောငျးအငျ​ဂငျြ​နီယာ(AE.EX) ၊ တပျမ​တျော​(​ရေ) NAVY-35024.E ၊Viber>>>09694506705
ဝမ်းချုပ်တာကို မပေါ့နဲ.ဗျာ 😱👇😱 ကင်ဆာရောဂါအထိတောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ် . ဝမ်းနှင့်​ပတ်​သက်​​သော​ရောဂါများအတွက်​ အိမ်​တိုင်း​ဆောင်​ရန်​​ဆေးတစ်​လက် ….. ရှဲပြီသိမ်းထားလိုက်ပါ